မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: သူများဟာလည်း မခိုးနဲ့ ကိုယ့်ဟာလည်း အခိုးမခံရစေနဲ့
ကျွန်တော်ကတော့ Google Reader ထဲကနေ ဖတ်ပြီး Google Reader ကနေဘဲ Email ခလုပ်နှိပ်ပြီး ဖတ်စေခြင်သူများကို မျှပါတယ်။ အဲဒါဆို ပြန်တင်တာ မကြိုက်မှာစိုးရိမ်ရတဲ့ ကိစ္စတွေအေးစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုကသိပ်ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်သိစေခြင်ရင်လဲ ကိုယ့်ဆီမှာ ကြော်ငြာသဘောမျိုး စာမြည်းလေးရေးပြီး မူရင်း ဘလော့လိပ်စာကို ညွှန်းလိုက်တာ ပိုမိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူလဲ ဟစ်တက်တာပေါ့နော့။ချိတ်မချိုးဘူး အဟုတ်လား ဂလိုကြောရို့ .. :P
Of course, correct too.ဒါပေသိ ဟစ်တက်စေတာကောင်းပေသိ အဆင်ပြေပြေ ဖတ်စေချင်တာကတော့ အဓိက စေတနာဗျ။ အရင်က မြန်မာမှာ blogspot တွေဖတ်ဖို့ ဘန်းကျော်ရတဲ့အချိန် ကျမတို့ရဲ့ myanmarbloggers.org ကျ ဘန်းကျော်ဖို့မလိုပဲ(ပုံတွေမမြင်ရတာကလွဲရင်) ဖတ်တဲ့သူတွေ ပိုအဆင်ပြေခဲ့ဖူးလို့ပါ။ ကျမ ဘလော့စရေးကတည်းက လင့်ခ်တွေချိတ်ပေးဖူးသူ လက်ချိုးရေလို့မကပါဘူး။ တကယ်တမ်း ဟစ်တက်လို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တကူးတက ပြောဖူးတဲ့သူကတော့ စေတန်ဂေါ့နဲ့ နေဘုန်းလတ် နှစ်ယောက်ပဲရှိဖူးတာ အမှတ်တယပါ။ (ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆင်ဆယ်ကောင် ဖမ်းပေးရင် ဘယ်သူမှ အသိအမှတ်ပြုဖို့ခက်ပေသိ ဆိတ်တစ်ကောင်လွတ်ရင်တော့ တကယ်မလွယ်ပါလား ဟရို့) :P
A sensible idea and reasonable explanation. But you are talking too much as you have free time. If not, you can simply say "piss off", I mean in your mind. Maybe you've already done so, I beleive